tranzit go power wheelchair - Karman Tranzit Go Electric Wiricheya
Tranzit-Go Simba Wiricheya - Inopetwa uye Kureba Kure
Usanyengerwe nemakwikwi. Yedu 20 ″ Ergonomic Contour Kugara yakafara kupfuura yakajairwa 18 ″ zvigaro zvinopihwa nevamwe. Seye rinorema basa modhi, iyi ndiyo yepamusoro yepamusoro yeiyo modhi modhi. Ichi chizvarwa chedu chechipiri TRANZIT GO uye usapotsa zvese zvitsva nekuvandudza kwatakaita pane ino gen yekuvandudza. Tinokupai mese marefu kufamba nzendo kunoenderana nekunyaradza kwepamusoro. Iyo foldable sarudzo inokutendera iwe nyore kumisikidza iyo wiricheya yemagetsi mumotokari yako kana kubhururuka. Iyo Tranzit Go dhizaini yakafemerwa nekushaikwa kwemaremu akapetwa emagetsi emawiricheya anowanikwa mumusika. Kupeta uye kukura kudiki kunoitendera kuti igone kutakurika mumotokari yako kubvisa kudiwa kweiyo yakasarudzika kutakura hitch maringe neyechinyakare sikuta. Standard 2 mabhatiri pamwe neyekufamba nendege yakamisikidzwa inobvumidza iyi kuve yakaedzwa uye yechokwadi yekufamba shamwari. Tora izvo chaizvo chero kwaunoenda. Ichi ichokwadi cheEV chaicho chekufambisa chikamu chine dhizaini! Sipa chinwiwa chako chaunofarira iwe uchivhara muTranzit Go yako uye uzviite kwete chete nesitayile asi nyaradzo! Iyi ndiyo inogona kunyatsokutora uchitenderedza guta chaiko uchinge uchionekwa. Tenga chete kubva kukambani inotsigirwa neinotungamira indasitiri zviyero uye zvikamu zveOEM. Tenga Karman nekufamba kwehupenyu!
Unoda kuti iendeswe nekukurumidza uye yakananga kubva kudura redu? Hapana dambudziko. Iwe unogona kusarudza kugadzirisa uye kusarudza kunze kwakawanda sarudzo kubva pazasi donhwe menyu. Iwe unogona zvakare kuidana iyo mukati kana iwe uchida kuwana yako odha pane que. Isu tinokwanisa kukurumidza kutumira kubva kudura redu zuva rimwe chetero kune ese maodha akaiswa pamberi pa3 pm Pacific Standard Nguva. Izvo zvakakosha kuti isu tipe vatengi vedu ruzivo rwakanakisa runogoneka uye ruzivo rwekutenga. Kuendesa yako wheelchair yakakwana iwe kana mudiwa iri pamusoro chaipo pane yedu yekutanga runyorwa. * Yekukurumidza ngarava Checkout, edu akajairika base mamodheru anozotumirwa mu20 ″ chigaro upamhi. Iwe unogona zvakare kugadzirisa pane inodonhedza menyu pazasi.
SKU: PW-F500 Categories: Bariatric Wiricheya, Wiricheya yemagetsi, Simba Mawiricheya, Vanotenderera, Vanotenderera & Vanofamba Tags: foldable simba wiricheya, shangu yemagetsi Wheechair, wheelchair isina mwero, simba rekufamba wiricheya, wiricheya, mavhiripu
The Tranzit Go chimurenga inopetwa Simba Wiricheya yakagadzirirwa kugadzirisa hupenyu hwevashandisi pasi rose. Imwe yeyakareruka kurema kupeta magetsi maguru, pa56 lbs chete, wiricheya iyi yakagadzirwa zvine chekufambisa mupfungwa. Kungotora masekondi mashoma kupeta kuita compact 14 ”, wiricheya iyi inosimudzira kusununguka, kufamba uye kunyaradza. Yakagadzirirwa zvese zvekunze uye zvemukati navigation, iyo yakanakisa kutendeuka radius inoita kuti kunetseka pamusoro penzvimbo dzakasimba kunetseka kwekare! Chigaro ichi chichauya kwauri chakanyatso kuungana uye ne 12.5 ”yakasimba yakapfava matai emahara, kukakavara pamusoro pekugona kwekuponja kwevhiri hazvichanetse!
Inorema chete 56 lbs (isina bhatiri)
Folding uye Lightweight furemu
Padded Seat uye Padded Backrest
Flip Kumusoro Footplate
Storage homwe Under Seat
Padded Flip Kudzoka Armrest
8 ″ x 1.5, Solid Polyurethane Pamberi Caster
12.5 ″ x 2, Solid Polyurethane Rear Caster
Yakapetwa Zviyero 25 x 14 x 32 inches
Lithium Ion Bhatiri (2pcs Inosanganisirwa)
Inobviswa Joystick & Cup Holder (yakaiswa kuruboshwe kana kurudyi)
Kurema pasina mabhatiri chete 56 lbs (62 lbs w / ese mabhatiri)
Kutendeuka Radius 35 ″
Kunonyanyisa Obstruction Height 1.20 padiki.
Maximum Gradient Slope 8 madhigirii
Kukurumidza Kwakanyanya: 4 mph
Kutyaira Range: gumi nemashanu mamaira
Yakurudzirwa & Max Kurema Unyanzvi: 330-400 lbs
Kurema Kugona 330-400 lbs.
Mberi Casters 8 "x 1.5"
Shure Wheel 12.5 "x 2"
bhatiri 24V / 6AH Li-Ion (2nd Bhetri Inesarudzo)
Max havukavu 4 mph
Kutengesa Nguva 6-8 maawa
Kutyaira Range 15-30 mamaira (Mamwe Mabhatiri Anowanikwa)
Kutendeuka Radius 35 "
Akazara murefu 25 inches
Kunopindirana Kureba 41 inches
Yakapetwa Kwose Upamhi 14 inches
Chigaro Kureba 20 inches
Chigaro Kudzika 16 inches
Kureba Kureba 14 inches
Uriri kusvika kuSeight Height 20 inches
Nekuda kwekuzvipira kwedu mukuenderera mberi nekuvandudza, Karman Healthcare inochengetera kodzero yekuchinja maratidziro uye dhizaini pasina chiziviso. Kupfuurirazve, kwete ese maficha uye sarudzo dzinopihwa dzinoenderana neese magadzirirwo ewiricheya.
Tranzit-Go Power Wheelchair UPC #
29 × 17 × 34 mukati